ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း(သချာင်္) – အမြင်စုတ်သော်လည်း ရွှေထုပ်သည့်မြပ၀ါများ | MoeMaKa Burmese News & Media
မိုးမခ၊ စက်တင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၄
အတွေးအမြင် အမှတ် ၉ ၃ ။၁၉ ၉ ၃ သြဂုတ်လက ပြန်လည်ဖော်ပြသည်
အမ်ဖေးဘွဲ့ကို အင်္ဂလန်နိုင်ငံတွင် ၁၉၇၅နှစ်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်က စတင်ပေးခဲ့သည်။ ထိုဘွဲ့ဖြစ် ပေါ်လာခဲ့ရသော အကြောင်းအရာမှာ ပီအိပ်(ချ)ဒီ (Ph.D)ခေါ် ပါရဂူဒေါက်တာဘွဲ့အတွက် ကျမ်းပြုစုနေ သောကျောင်းသားများမှ စတင်ခဲ့သည်။ ထိုကျောင်းသားများသည် အချိန်သုံး၊ လေး၊ ငါးနှစ်လောက် ကုန်သော်လည်း ပီအိပ်(ချ)ဒီ အတွက် ကျမ်းမပြီးစီးဘဲ ဖြစ်နေသည်။ သို့သော်သူတို့သည် မဟာသိပံ္ပ (M.Sc) ထက် အဆင့်မြင့်သော ကျမ်းများကို ပြုစုနိုင်သော အခြေအနေရှိနေသည်။ ထို့ကြောင့် သူတို့၏ ကြိုးစားမှုနှင့် တက်မြောက်မှုကို အသိအမှတ်ပြုသည့်အနေဖြင့် မဟာသိပံ္ပ နှင့် ပီအိပ်(ချ)ဒီကြားတွင် အမ်ဖေးဟူသော ဘွဲ့တစ်ခုတီိထွင်၍ ပေးလိုက်သည်။ ထို့ကြောင့် အင်္ဂလန်နိုင်ငံတွင် အမ်ဖေးသည် မဟာသိပံ္ပ ထက်မြင့်ပြီး ပီအိပ်(ချ)ဒီထက် နိမ့်သည်။
သို့သော် အချို့သော်နိုင်ငံများတွင် အမ်ဖေးဘွဲ့ကို ဘီအက်စီ ဂုဏ်ထူး B.Sc (Hons.) နှင့် မဟာ သိပံ္ပ ကြားဟူ၍ သတ်မှတ်သည်။ ထိုနိုင်ငံများတွင် အမ်ဖေးသည် ဘီအက်စီဂုဏ်ထူးထက်မြင့်ပြီး မဟာသိပံ္ပ ထက်နိမ့်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ တက္ကသိုလ် ကောလိပ်များ၏ ပညာရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေကျင့်ထုံးများအရ မဟာသိပံ္ပ ပထမနှစ်စာမေးပွဲတွင် နှစ်ကြိမ်ကျရှုံးသောသူ၊သို.မဟုတ် ဘီအက်စီဂုဏ်ထူးတန်းတွင် တတိယအဆင့်သာရရှိ သူများသည် မဟာသိပံ္ပ ဆက်တက်ခွင့်မရှိတော့ချေ။ ၁၉၈၇ ခုနှစ်လောက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ တက္ကသိုလ် ကောလိပ်များ၌ ထိုဥပဒေများနှင့် ငြိစွန်း၍ မဟာသိပံ္ပ ဆက်တက်၍ မရနိုင်သော ဆရာ/ဆရာမများစွာ ရှိနေ ကြသည်။ တစ်ဖန်/မဟာသိပံ္ပ ဘွဲ့ရမှသာ ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းကို ခံရမည်ဟူသော စည်းမျဉ်းအရ ထိုဆရာ/ ဆရာမများအတွက်အခွင့်အလမ်းများပိတ်နေသည်။
ထို့ကြောင့် ထိုဆရာ/ဆရာမများအတွက် အခွင့်အလမ်းသစ်တစ်ခုရရှိစေရန် ဘီအက်စီဂုဏ်ထူး တန်းနှင့် မဟာသိပံ္ပကြားတွင် အမ်ဖေးအမည်ရှိသော ဘွဲ့တစ်ခုကို တီထွင်ပေးရလေသည်။ အမ်ဖေးဘွဲ့ကို ရရှိစေရန်အတွက် လိုအပ်ချက်မှာ နှစ်နှစ်အတွင်း ကျမ်းငယ် (small thesis) ခြောက်ခုကို တင်သွင်းရန်ဖြစ် သည်။
ကျွန်တော်သည် ဆရာ/ဆရာမအချို့၏ အမ်ဖေးကျမ်းငယ်များကို ကြီးကြပ်ရန် တာဝန်ကျခဲ့သည်။ ၁၉၈၆ ခုနှစ်နှင့် ၁၉၈၈ ခုနှစ်အတွင်းတွင် ကျွန်တော်သည် သင်ကြားရေးဝါရင့်သော်လည်း မဟာသိပံ္ပ ဆက်မတက်နိုင်သော ဆရာ/ဆရာမအချို့၏ အမ်ဖေးကျမ်းငယ်များကို အောင်မြင်စွာ ကြီးကြပ်ပြီးစီးခဲ့သည်။
ထိုအခါ ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်လောက်က မြန်မာနိုင်ငံ ဗဟိုရှပ်ရှင်မှ ရိုက်ကူးသေည သတင်းကားတစ်ခုကို အမှတ်ရမိသည်။ ထိုသတင်းကားမှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဦးဆုံးတည်ဆောက်ခဲ့သော ဂုံနီအိတ်စက်ရုံ အကြောင်းဖြစ်သည်။ သတင်းကြေညာသူက ဤသို့ပြောသည်ကို မှတ်မိသည်။
“အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမ ဦးဆုံးထုတ်တဲ့ ဂုံနီအိတ်တွေကိုကြည့်လိုက်ရင် အမြင်ကလဲမလှ၊ ကြမ်းလဲကြမ်း၊ လူကြားထဲလဲကိုင်လို့မရတဲ့ အိတ်စုတ်၊ အိတ်ဟောင်းတွေနဲ့တူပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီဂုံနီအိတ်တွေက အမြင်စုတ်ပေမယ့် ရွှေထုတ်တဲ့ မြပ၀ါတွေလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ အဲဒီဂုံနီအိတ်တွေကို ပြည်တွင်းပစ္စည်းများကိုသာ အဓိက ကုန်ကြမ်းအဖြစ်သုံးပြီး ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ အဲဒီအိတ်တွေကို မြန်မာနိုင်ငံက ထွက်တဲ့ ပဲ၊ ဆန်စတဲ့ကုန် ပစ္စည်းတွေ ထုပ်ပိုးရာမှာ မသုံးမဖြစ်သုံးရပါတယ်။ အဲဒီလို ထုပ်ပိုးပြီး ပြည်တွင်းစာသုံးဖို့နဲ့ နိုင်ငံခြားပို့ဖို့ အတွက် သယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံခြားငွေ အကုန်အကျသတ်သာရုံသာမက နိုင်ငံခြားငွေ ရရှိဖို့ ကိုပင်လျှင် အထောက်အကူဖြစ်နေပါတယ်”
ရှေးဦးစွာ အမ်ဖေးနှင့် မဟာသိပံ္ပ ကျမ်းများကြီးကြပ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သော ကျွန်တော်၏အခြေခံ အယူအဆများကို ရှင်းပြရန်လိုပါသည်။ ၎င်းအယူအဆများမှာ –
အနာဂတ်ကို ကြိုတင်၍ မမြင်သော ကျွန်တော်သည် မျှော်မှန်းချက်များစွာဖြင့် How to Prepare if M.Sc or M.Phil. မဟာသိပံ္ပ သို့မဟုတ် အမ်ဖေးကျမ်းအတွက် ပြင်ဆင်နည်း အမည်ရှိစာတမ်းတစ်ခုကို ရေးသားပြုစု၍ အမ်ဖေးစာတမ်းပြုမည့် သင်တန်းသားများအား သင်တန်းစတင်ပေးခဲ့သည်။ သင်တန်းဖွင့်ပွဲ တွင် ဤသို့စတင်ပြောကြားခဲ့သည် “အမ်ဖေး သို့မဟုတ် မဟာသိပံ္ပ ကျမ်းပြုစုဖို့အတွက် စာဖတ်တာဟာ စာမေးပွဲဖြေဆိုဖို့ ဖတ်တာနဲ့ မတူဘူးဆိုတာ အရင်ဆုံးသိဖုို့လိုတယ်။ စာမေးပွဲ ဖြေဆိုဖို့ဖတ်တာက စာမေးပွဲ ဖြေပြီးရင် အားလုံးမေ့သွားလို့ ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ ကျမ်းပြုစုဖို့ကျတော့ အမြဲတမ်းတတ်မြောက်နေဖို့ သိနေဖုို့လုိုတယ်။ စာမေးပွဲဖြေဆုိုဖုို့ စာဖတ်တဲ့အခါမှာ စာမေးပွဲ ပါမယ်ထင်တာတွေ ရွေးပြီးတတ်သည်ဖြစ်စေ၊ မတတ်သည်ဖြစ်စေ၊ အလွတ်ကျက် သွားနိုင်တယ်။ အဲဒီအခါမှာ ကံကောင်းရင်အောင်တာပဲ။ ဂုဏ်ထူးတောင် ထွက်သေးတယ်။ သို့သော် ကျမ်းပြုစုဖို့ကျတော့ အားလုံးကို တတ်ထား၊ ဆရာနဲကလဲအချိန်မရွေးဆွေးနွေးနိုင်တော့မှ တန်ကာကျ တယ်။”
“ဒါကြောင့် ကျမ်းပြုစုတဲ့ သင်တန်းသားတွေဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘာသိတယ်၊ ဘာမသိဘူး ဆိုတာ အရင်ဆုံး မလိမ်မညာဘဲသိဖို့လိုတယ်။ မသိတာတွေကို သိအောင်လုပ်ရမယ်။”
“စာမျက်နှာ တစ်ခုကို ဖတ်တိုင်း အဲဒီစာမျက်နှာမှာ Key words လို့ ခေါ်တဲ့ သော့ချက်ကျတဲ့ စကားလုံးတွေကို ရွေးထုတ်တတ်ရမယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ စကားလုံးအားလုံးရဲ့ အဓိပ္ပါယ်တွေသိစရာတော့ မလိုပါဘူး။ သို့သော်လဲ ဘယ်စကားလုံးတွေရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဟာတော့ မသိမဖြစ် သိရမယ်ဆိုတာ ရွေးတတ်ရ မယ်။ သိတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲ နှစ်မျိုးနှစ်စားရှိပြန်တယ်။ အပေါ်ယံညာဝါးပြီး သိတာနဲ့ အသေအချာ သိတာနှစ်မျိုးရှိတယ်။ ဘယ်စကားလုံးတွေကို အပေါ်ယံညာဝါးပြီး သိရုံလောက်နဲ့လုံလောက်တယ်၊ ဘယ်စကားလုံးတွေကိုတော့ အသေအချာ သိရမယ်ဆိုတာ ရွေးတတ်ရမယ်။”
“သင်္ချာမှာ စကားလုံးတစ်လုံးတည်း သင်္ကေတတစ်ခုတည်းကို အဓိပ္ပါယ်အမျိုးမျိုးနဲ့ သုံးတတ်တယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်မြင်နေကျ စကားလုံး၊ သင်္ကေတဖြစ်လင့်ကစား ပေါ့ပေါ့တန်တန်ကျော်မသွားပါနဲ့။ ဘယ်အဓိပ္ပါယ်နဲ့သုံးထားတယ် ဆိုတာကို အသေအချာလေ့လာပါ။”
“သင်္ချာမှာ အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက်များ (definitions) ကို အထူးသတိပြု လေ့လာပါ။ အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက်များမှာ နောင်တည်ဆောက်မည့် သင်္ချာအဆောက်အအုံရဲ့ အခြေခံ အုတ်မြစ်ဖြစ်တယ်။”
(၁) လွယ်ကူရှင်းလင်းသော အခြေခံများကို အနိမ့်ဆုံးအဆင့်မှ စတင်၍ သင်ပေးခြင်းအားဖြင့် သင်တန်း သားများ တတ်မြောက်လာလိမ့်မည်ဟူသော ယူဆချက်သည် မှား၏။ အမ်ဖေးလာရောက်စစ်ဆေး သော ပြင်ပစာစစ်ဆရာကြီးတစ်ဦးက “မင်းတပည့်တွေဟာ ဘယ်လိုဟာတွေလဲကွာ၊ အမ်ဖေး ကျမ်းရေးနေပြီး ပထမနှစ်က စာတွေတောင် မတတ်ပါလား၊ မင်းဘယ်လို လုပ်တာလဲ” ဟုမေးရာ ကျွန်တော်က ဤသို့ပြန်ဖြေခဲ့သည်။ “ကျွန်တော်လဲ ဒါတွေကို သိလို့ အနိမ့်ဆုံးအင့်က စပြီးသင် တာပဲ” ထိုအခါ ထိုဆရာကြီးက “အေး-အဲဒါလဲမင်းအမှားပဲ၊ သင်တန်းသား ဖြစ်လာရင် ကျောင်းသား ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ကချည်း သင်ရင်မတတ်ဘူး၊ သူတို့ကို ဖတ်ခိုင်းပြီး ပြန်ရှင်းပြခိုင်းရ တယ်။ ” ဟု ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့သည်။
(၂) ကျွန်တော်သည် အမ်ဖေး၊ သင်တန်းသားများအား စတင်၍ သင်ရန်ပြင်ဆင်နေစဉ် ကျွန်တော်၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များက ဤသို့ပြော၏။ “ခင်ဗျားသင်မနေနဲ့ အလကားပဲ။ ခင်ဗျားဆီကို အခု ရောက်လာတဲ့ သင်တန်းသားတွေ ယူဆထားတာက ခင်ဗျားဟာသဘောကောင်းတယ်၊ ဒါကြောင့် ခင်ဗျားဆီကလာရင် အမ်ဖေးဘွဲ့အချောင်ရမှာပဲလို့ပဲ ဖြစ်တယ်။ သူတို့တွေဟာ တတ်လဲ မတတ်ဘူး။ တတ်လဲမတတ်ချင်ဘူး။ ဘွဲ့ကိုသာ အချောင်လိုချင်တာ”
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:အတွေးအမြင်, ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း (သချာင်္), ပြန်လည်ဆန်းသစ်ခြင်း